Koogeek: အမေဇုံရှိသင့်အိမ်နှင့်ကျန်းမာရေးအသုံးအဆောင်များအတွက်အထူးလျှော့စျေးများ Gadget သတင်း
အမေဇုံတွင်ရောင်းသည့် Koogeek ၏အကောင်းဆုံးအိမ်နှင့်ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများ
၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ထွက်ရပ်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရှိပါက စမတ်အိမ်နှင့်ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များသည် Koogeek ဖြစ်သည်။ သင်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကစားသုံးသူလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို fit ။ ထို့အပြင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ထုတ်ကုန်များစွာရှိပြီးဖြစ်သည် ဝဘ်ပေါ်တွင်လူသိများကြသည်.
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စီးရီးကိုရှာပါ Koogeek အိမ်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများကို Amazon တွင်ရောင်းချသည်။ ၎င်းသည်ယာယီကမ်းလှမ်းချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိရိယာများကိုသင်အထူးလျှော့စျေးရနိုင်သည်။ အောက်မှာပြောချင်ပါတယ် -
5 dodocool 10000mAh ခရီးဆောင်ပြင်ပဘက်ထရီ
6 dodocool Hub USB ကို C
ဤ plug သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏လူသိအများဆုံးထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ထားသောမည်သည့်စက်ကိုမဆိုအဝေးမှထိန်းချုပ်သည်။ Android နဲ့ iOS နဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ app တစ်ခုမှတဆင့်ဒီပစ္စည်းကိုအချိန်မရွေးတကယ်အဆင်ပြေစွာဖွင့်နိုင်မှာပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောကောင်းကျိုးများအနက်မှတစ်ခုမှာ၎င်းသည် Apple ၏ Alexa, Google Assistant နှင့် HomeKit နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုသင်ပြုပြင်လိုက်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည် plug ကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန်လက်ထောက်ကိုအသုံးပြုပါ အသံအမိန့်ဖြင့်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို၎င်းကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေမည့်အရာတစ်ခုခု။ သင်ဟာအိမ်မှာဖြစ်စေ၊ အခြားအခန်းထဲမှာရှိနေသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ရှိနေစေ။ ၎င်းသည်ဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်သောအခါသင်လည်းပရိုဂရမ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤ Koogeek ပလပ်သည်တည်ရှိသည် 26,99 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာရရှိနိုင် အရောင်း။ လျှော့စျေးရရှိရန်သင်ဤလျှော့စျေးကုဒ်ကိုအသုံးပြုရမည်။ S8W5ENHL ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2019. သည်အထိအသုံးပြုနိုင် 50 ယူနစ်ကန့်သတ်။
ဒုတိယအချက်ကိုတွေ့ပြီ ဒီလက်ကောက်ဝတ်သွေးဖိအားမော်နီတာ, ဒီဂျစ်တယ် display ကိုနှင့်အတူပါရှိသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်၊ တိုင်းတာမှုရလဒ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်၎င်းသည်လူအမျိုးမျိုးအတွက်အကောင်းဆုံးသောမျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းကို Android နဲ့ iOS ကနေအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်တဲ့ app တစ်ခုကနေထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအပလီကေးရှင်းကတိုင်းတာမှုမှတ်တမ်းနှင့်ရလဒ်များကိုအချိန်မရွေးခြေရာခံရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများရှိသောလူတစ် ဦး ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုသင်လိုက်နာလိုပါကအလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခု။ ထို့ကြောင့်ဤဒေတာများကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။ အမေဇုံကငါတို့ကိုဒီ Koogeek သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာပေးသည် ရုံ 15,99 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာ.
ပရိုမိုးရှင်းအတွက်စိတ် ၀ င်စားသူများအတွက်စတိုးဆိုင်တွင်ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်အထိ UZ7VFLY6 လျှော့စျေးကုဒ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုယူနစ် ၅၀ အထိကန့်သတ်ထားသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ခွာသောနောက်ထုတ်ကုန်ဤဖြစ်ပါသည် EMS massager (လျှပ်စစ်ကြွက်သားလှုံ့ဆော်မှု)၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာရှိmassရိယာတစ်ခုကိုအနှိပ်ပြုလုပ်ရန်၊ ၎င်းကိုအနားယူရန်သို့မဟုတ်ကြွက်သားပြproblemနာရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည်ဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်ဖြစ်စေ၊ အချို့သောအလုပ်များကိုလုပ်သည်ဖြစ်စေကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်သုံးစွဲသူ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောပုံစံကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒါဟာခွင့်ပြု အလွယ်တကူပြင်းထန်မှုနှင့်မြန်နှုန်းညှိ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီသို့ သင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောစိတ်အေးလက်အေးသို့မဟုတ်လျော့နည်းပြင်းထန်သောအနှိပ်ကိုရှာဖွေနေခြင်းရှိမရှိ, ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်မှုသာ။ ကြီးမြတ်သည့်အတွက်တ ဦး တည်း။ Koogeek အသုံးပြုသူများကိုရရှိနိုင်သည့် application တစ်ခုကြောင့်ဤအရာအားလုံးကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အခြေအနေတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်တိုင်းချိန်ညှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီ app ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ကျနော်တို့ကသူ့ကိုမှာဖြည့်ဆည်း ဒီပရိုမိုးရှင်းအတွက် 19,99 ယူရိုစျေးနှုန်း အမေဇုံအပေါ်။ ၎င်းအထူးစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိရန်ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်အထိရရှိနိုင်သော TBXC8LFT လျှော့စျေးကုဒ်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုယူနစ် ၅၀ အထိကန့်သတ်ထားသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ကက်တလောက်ထဲမှအခြားလူသိများသောထုတ်ကုန်တစ်ခုမှာဒီဂျစ်တယ်သာမိုမီတာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောပုံစံဖြင့်ထင်ရှားပြီး၎င်းသည်ငါတို့နှင့်အမြဲတမ်းသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုရှေ့နှင့်နားနှစ်ဘက်စလုံးတွင် ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည်အခြေအနေတစ်ခုစီတွင်အဆင်ပြေဆုံးရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Bluetooth ရှိနေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိအက်ပ်တစ်ခုနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်တိုင်းတာမှုအားလုံး၏မှတ်တမ်းရှိသည်။
လူတစ်ယောက်နေမကောင်းဖြစ်လျှင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုခြေရာခံရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်အမှတ်တံဆိပ်ကနေဒီသာမိုမီတာ စစ်ဆင်ရေး၎င်း၏မြန်နှုန်းထွက်သည်ကိုဆိုလိုတာပါ။ တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်ကိုအခြားမော်ဒယ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားစွာပေးလိမ့်မည်။ စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါတို့တွေ့ပြီ ၁၈.၉၉ ယူရိုဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောအမေဇုံတွင်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ PNW8DANI ကိုဤအထူးစျေးနှုန်းဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်အထိရနိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်သင်လျှော့စျေးကုဒ်ကိုအသုံးပြုရမည်။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုယူနစ် ၅၀ အထိကန့်သတ်ထားသည်။
dodocool 10000mAh ခရီးဆောင်ပြင်ပဘက်ထရီ
Koogeek ထုတ်ကုန်များအပြင် dodocool ထုတ်ကုန်များစုံတွဲသည်လည်းစာရင်းထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်နေသည်။ သူတို့ထဲကပထမဆုံးကတော့ဒီပြင်ပဘက်ထရီပါ စွမ်းရည် ၁၀၀၀၀ mAh ရှိသည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစမတ်ဖုန်းတစ်လုံး (သို့) တစ်ခုထက်ပိုပြီးအားသွင်းနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ ထူးခြားချက်မှာ၎င်းတွင် port အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး၎င်းသည်မည်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားနှင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ်စေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ microUSB, USB-C port နဲ့အခြား USB output နှစ်ခုရှိတယ်။
ဤသည်ဆက်ဆက်အသုံးပြုသူများအားအဆင်ပြေအများကြီးပေးသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနှင့်အခြားသူတစ် ဦး ၏ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်အားသွင်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစရှိပါတယ် ကျန်ရှိသောစွမ်းအင်ရာခိုင်နှုန်းဖေါ်ပြခြင်း, သငျသညျအစဉ်အမြဲကကောင်းသောထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်း။
ဤမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွင် Amazon တွင် ၀ ယ်နိုင်သည် ယူရို 19,59 ၏စျေးနှုန်းမှာ။ ဒီစျေးနှုန်းနဲ့ရရှိဖို့ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်အထိရရှိနိုင်မယ့်ဒီလျှော့စျေးကုဒ်ကို 8FRNWFXJ ကိုအသုံးပြုရမည်။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုယူနစ် ၅၀ အထိကန့်သတ်ထားသည်။
dodocool Hub USB ကို C
နောက်ဆုံး USB Hub ကိုရှာမယ်။ ငါတို့ဆိပ်ကမ်းခုနစ်လုံးရှိသည်၎င်းသည်ကိရိယာအမျိုးမျိုးကို၎င်းနှင့်အလွန်ရိုးရှင်းသောဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင်သင့်လက်ပ်တော့ပ်သို့မဟုတ် desktop ပေါ်တွင် port များအလုံအလောက်မရှိပါကဤ option ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်အပိုပစ္စည်းများကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ports အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုပိုမိုဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်စေသည်။
နောက်ထပ်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုမှာသေးငယ်သည့်အရွယ်အစားဖြစ်သည်, အနည်းငယ်သာ desktop ပေါ်မှာအာကာသတက်ကြာပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ်၎င်းကိုသိမ်းရန်လိုအပ်သည့်အခါသင်၌ပြproblemsနာမရှိပါ။ ဒီမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်မှာ Amazon မှာယူရို ၂၉.၉၉ နဲ့ဝယ်ယူနိုင်တယ်။ OI29,99JF ကိုဤအထူးစျေးနှုန်းဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်အထိလျှော့စျေးကုဒ်ဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုယူနစ် ၅၀ အထိကန့်သတ်ထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » အမေဇုံတွင်ရောင်းသည့် Koogeek ၏အကောင်းဆုံးအိမ်နှင့်ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများ
FaceTime bug သည် Apple လက်ထဲတွင်ရက်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့သည်